အကြည်‌‌ရောင်‌ အံစွပ်‌က‌လေးများကို အသုံးပြုပြီး သွားညှိကုသခြင်း (Invisalign) – D-Royal
November 21, 2020 December 1, 2020 Hap EyeServices
Brace(စတီးကြိုး)မတပ်‌ချင်‌ဘဲ သွားညှိကုသဖို့ စဉ်‌းစား‌နေပါသလား။???
Brace(စတီးကြိုး) တပ်‌ရမယ့်အ‌ရေးကိုတွေးပြီး စိတ်‌ညစ်‌‌နေသူများအတွက်‌ အကြည်‌‌ရောင်‌ အံစွပ်‌က‌လေးများကို အသုံးပြုပီး သွားညှိကုသတဲ့ Invisalign‌လေးလာပြီနော်‌။
တပ်‌လို့တပ်‌ထားမှန်း မသိသာ‌စေတဲ့အတွက်‌ Braceတပ်‌မှာ ရှက်‌‌ကြောက်‌‌နေတဲ့သူတွေ၊ အလှပျက်‌မှာ‌ စိုးရိမ်‌‌နေတဲ့သူ‌တွေ၊ အနုပညာရှင်‌များ၊ presenterများအတွက်‌ မိမိတစ်‌‌နေ့တာ လုပ်‌ငန်းဆောင်‌တာများ အဆင်‌‌ပြေ‌စေ‌ရေးအတွက်‌ Invisalignက အသင့်တော်‌ဆုံးပါပဲခင်‌ဗျာ။
Invisalignကို ‌သေချာtrainingယူထားတဲ့ Orthodontistကိုယ်‌တိုင်‌ Free Consultationပေးသွားမှာဖြစ်‌ပါသည်‌။
ကဲ အခု D Royal Dental Clinic မှာ Invisalign နဲ့ သွားညှိကုသချင်‌သူများအတွက်‌ အရမ်းတန်တဲ့ 40% promotion စနေပီး‌နော်။ ‌နောက်‌ပီး တခါတည်‌း‌ပေးသွင်‌းစရာမလိုပဲ အရစ်‌ကျပုံစံနှင့် ၄ ကြိမ်‌ခွဲသွင့်လို့ရဦးမှာမို့ ဒီလိုအရမ်းတန်‌တဲ့ အခွင့်အ‌ရေးကို လက်‌လွှတ်‌မခံပါနဲ့‌နော်‌။
ဒါ့အပြင် ပုံမှန် US $400 ကျသင့်မည့် iTero intra oral scanning ကို ယခု Promotion ကာလအတွင်း $200နဲ့သာ ပြုလုပ်‌‌ပေးသွားမှာ ဖြစ်‌ပါတယ်‌။
Promotion ကာလကို August လကုန်‌ထိသာ သတ်‌မှတ်‌ထားတာမို့ အမြန်‌စာရင်းပေးဖို့ မ‌မေ့ကြနဲ့‌နော်‌။
iTero intra oral scanning ဆိုတာက…
ဒီ Invisalign Clear aligner systemနဲ့ သွားညှိကုသခြင်း before & after result ပုံကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ကြိုတင်သိရှိနိုင်တဲ့ iTero Scanner and 3D သရုပ်ဖော်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။. . .
Scanning လုပ်ပြီး before & after result ကို စိတ်တိုင်းကျပြီဆိုရင်တော့ သင့်အတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသော Aligner အကြည်ရောင် သွားစွပ်များဖြင့် ကုသမှုကို စတင်နိုင်ပါပြီ။
အကြည်စွပ်က‌‌လေးကို သွားမှာ၂ ပတ်‌တစ်‌ကြိမ်‌လဲပြီး တပ်ထားရုံဖြင့် ယုံကြည်‌မှု အပြည့်ရှိပီး‌တော့ ညီညာလှပ‌သော သွားများကို ပိုင်‌ဆိုင်‌‌စေမှာ ဖြစ်‌ပါသည်‌။
Smart force technology and smart track material များကို အသုံးပြု၍ သွားထပ်‌တာ၊ သွားကျဲတာ၊ အစသွား မညီမညာဖြစ်‌တာ၊ သွား ပုံမှန်‌မ‌ပေါက်‌ခြင်း အစ‌ရှိ‌သော ပြဿနာများကို အ‌ကောင်းဆုံး result ရ‌အောင်‌ Invisalign ဖြင့်ကုသနိုင်‌ပါပြီခင်‌ဗျာ။
ကမ္ဘာတစ်‌ဝန်းလုံးရှိ လူဦးရေ 5သန်းကျော်မျှ Invisalign နဲ့ကုသမှု ခံယူ‌နေကြပီး ဖြစ်‌ပါတယ်‌။
(1) Wireless ဖြစ်‌တဲ့အတွက်‌ Brace တပ်‌ရာတွင်‌ဖြစ်‌‌သော wire စူးရှခြင်းမှ ကင်းဝေးခြင်း။
(2) ရုတ်‌တရက်‌ ကြည့်လိုက်‌လျှင်‌ တပ်‌ထားမှန်‌းမသိရှိခြင်း။
(3) အစားအ‌သောက်‌ စားရတွင်‌လည်း အခက်‌အခဲမရှိ‌ခြင်း။
(4) Braceကြောင့်ဖြစ်‌‌သော အစာညပ်‌ခြင်းပြဿနာ ကင်းဝေးခြင်း။
(5) ဖြုတ်‌လို့တပ်‌လို့ရ‌သော‌ကြောင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရ လွယ်‌ကူခြင်း။
(6) လူနာ တစ်‌ဦးခြင်းစီအတွက်‌ Customized clear aligner သီးသန့်ပြုလုပ်‌‌ပေးထားခြင်း။
D Royal Dental Clinic ဟာ Invisalign Myanmar Provider Clinic ဖြစ်‌တာနဲ့အညီ World No.1 Clear Aligner System ဖြစ်‌သည့် Invisalign (made in USA)ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အစီအစဉ်‌မှာ ပါဝင်‌ကြဖို့ ဖိတ်‌‌ခေါ်အပ်‌ပါတယ်‌ခင်‌ဗျာ။
Address : အမှတ်(၅၀)၊ မြေညီထပ်၊ အလယ်ဘလောက် ဌာနာလမ်း၊ နတ်စင်လမ်း ဘေးကပ်လျက်လမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ကမ်းနားလမ်း နှင့်ပိုနီး၊ လမ်းထိပ်တွင် မြန်မာ့ရှေ့ဆောင်ဘဏ်ရှိ။
Contact no. . 09 979 005 387, Viber. . 09 979 005 387